Miarahaba anao ny filohan'ny oniversite Hodges, Dr. John Meyer!
Ianaro ny antony mahatonga ny oniversite Hodges ho oniversite miavaka any Southwest Florida
Hihaona amin'ny Dr. Meyer sy ny Oniversite Hodges
Amin'ny maha-anjerimanontolo an'ny Hodges University ahy ihany fa ny filohany koa dia tsapako fa manana fahaizana manokana mampamangy anao handray an'ity andrimpanjakana mahafinaritra ity aho. Izahay dia orinasam-paritra ekena, tsy miankina, tsy mitady tombombarotra, naorina tamin'ny taona 1990 ary manompo am-pireharehana an'i Southwest Florida nanomboka teo. Nivelatra ny oniversite mba hanomezana izay ilain'ny vondrom-piarahamonintsika - ny tontolo manodidina antsika - miaraka amin'ireo campus any Fort Myers sy Naples, Florida, ary ny asa fitoriana izay tsy ny fampianarana nentin-drazana eny amin'ny campus ihany fa ny fampianarana sy programa an-tserasera ihany koa.
Ny tanjonay dia ny fanomanana ireo mpianatra hitrandraka fahalalana ambony amin'ny ezaka manokana, matihanina ary olom-pirenena.
Tontolo iainana tsy manam-paharoa ao amin'ny Oniversite Hodges
Ny Hodges University dia manome tontolo iainana tsy mitovy amin'ny andrim-panjakana hafa ao amin'ny faritra amin'ny alàlan'ny fanolorana:
programa fanamarinana, mpiara-miasa, bakalorea ary bakalorea;
fandaharam-potoana isan'andro, hariva, mifangaro ary kilasy amin'ny Internet;
taranja ampianarin'ny profesora izay ankehitriny na efa fanazaran-tena teo amin'ny sehatra misy azy avy; SY
fandaharana natao hanampiana ny mpianatra hampiasa izay nianarany tany am-piasana.
Ho fanampin'izany, maro amin'ireo fandaharanay no manampy ny mpianatray hahazo mari-pahaizana arak'asa amin'ny sehatry ny fitaizana be antitra, ny fitantanam-bolam-panjakana ary ny torohevitra momba ny fahasalamana ara-tsaina. Ny sasany mitarika fanamarinana indostrialy. Ireo veterana miaramila, mpikambana mpikarakara andraikitra mavitrika ary ny fianakaviany dia afaka mahazo fanampiana amin'ny tanjon'izy ireo amin'ny fanabeazana amin'ny alàlan'ny Dr. Peter Thomas Veterans Services Center.
Ny Hodges University koa dia manolotra programa anglisy miavaka sy feno amin'ny maha-fiteny faharoa (ESL) izay manolotra ny firobohana amin'ny teny anglisy ho an'ireo tsy miteny vazaha miteny anglisy izay te hampitombo ny fahaizany miteny. Firenena mihoatra ny 25 isan-karazany no misolo tena ny mpianatra ESL.
Ny fandraisan'anjaran'i Hodges oniversite ho loharanom-pahalalana ho an'ny fiarahamonina
Ary farany, izahay dia mpiorina amin'ny faritra atsimo andrefan'i Florida, mandray andraikitra satria lafiny iray amin'ny fidirana amin'ny fampianarana ambony ho an'ny mpianatra sy ho mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy sosialy misimisy kokoa. Izahay dia mirehareha amin'ny anjara andraikitray amin'ity vondrom-piarahamonina mahafinaritra ity, ary mihevitra ny andraikitra ho vokatr'izany izahay. Miaraka amin'ny fanoloran-tenantsika maharitra hanampy amin'ny fanomezana mpiasa mahay sy mahay tsara amin'ny mpiasa eo an-toerana izay mitombo, dia mitady hatrany izahay hamantatra ireo fomba hafa azon'ny andrimpanjakana iasana any Southwest Florida.
Manasa anao aho hizaha izay rehetra natolotry ny Oniversite Hodges ary ho hitanao manokana izay mampiavaka antsika amin'ireo andrim-pianarana ambony hafa. Mino aho fa ho talanjona amin'ny zavatra atolotry ity oniversite ity ianao.
Ny iraka sy ny vina ary ny Andry amin'ny oniversite Hodges
Ny Hodges University - andrim-panjakana tsy miankina amin'ny fanjakana - dia manomana ny mpianatra hitrandraka fianarana ambony amin'ny ezaka manokana, matihanina ary olom-pirenena.
Hodges University dia ekena amin'ny fahombiazany amin'ny fanabeazam-pirenena mifantoka amin'ny asa sy ny firotsahan'ny fiaraha-monina.
Hatsarao hatrany ny portfolio-n'ny vokatra Hodges hihaona amin'ny filan'ny mpiara-monina sy ny mpampiasa.
Ho an'ny fandaharam-pianarana, ampitombo ny mety hisoratra anarana, fitazonana, fizarana diplaoma ary asa ny mpianatra.
Ho an'ny fandaharam-pianarana tsy akademika, tolory ny filan'ny mpiara-monina sy ny tombontsoan'ny mpandray anjara.
Mamolavola programa vaovao momba ny filàna tsy ilaina, mipoitra ary ho avy ao anatin'ny vondrom-piarahamoninay, ho tombontsoan'ny mpampiasa isam-paritra sy ny mpianatsika.
Mametraha fandaharana hiato na hisotro ronono izay tsy mahafeno ny tanjon'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny andrim-panjakana sy ny vondrom-piarahamonina intsony.
Misarika sy mitazona mpiasa iray mahay, isan-karazany ary mampitombo ny fiatraikany tsara amin'ny mpiasa tsirairay.
Ampiharo ny fanatsarana ny dingana izay mampitombo ny fahaiza-miasa ary manatsara ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny mpianatra sy ny mpandray anjara hafa.
Mampifantoka ny ezaka amin'ny fahasalamana ara-bola eo amin'ny andrim-panjakana.
Mizarà amin'ny fomba mandaitra kokoa ny tantaran'ny Hodges University amin'ny mpianatra, mpampianatra ary mpiasa, alumni, naman'ny Oniversite, sy ireo vondrom-piarahamonintsika, ary manatanteraka hetsika - matetika amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombon'antoka — izay manompo ny vondrom-piarahamoninay.
Mamolavola fomba vaovao hifaneraseran'ny mpianatra amin'ny vondrom-piarahamonina midadasika kokoa mba hivoahan'ny oniversite Hodges malalaka, lalina ary mifandraika kokoa.
Fantaro ny fotoana mety sy ny andraikitra ara-jeografika izay misy any Southwest Florida, ny fanjakan'i Florida, ary ny faritra misy anay.
Hamafiso ny tambajotran'olon-tokana sy andrim-panjakana Hodges hanitatra ny sehatry ny fitaomana.
Fiantohana loharanom-bola vaovao ivelany (vatsim-pianarana, vola fanampiana, fanohanana ny tetikasa renivohitra) hanohanana ny andrimpanjakana.
Miorina amin'ny ho avy amin'ny alàlan'ny drafitra sy fampiharana stratejika mahomby.
Kilasy 2021 (Tapitra ny fe-potoana Oktobra 2021):
Gillian Cummings-Beck, talen'ny fitantanana risika, Taylor Morrison
Jerry F. Nichols, filoha lefitra zokiolona, ​​tombontsoa Brown sy Brown
Kilasy 2022 (Tapitra ny fe-potoana Oktobra 2022):
Michael Prioletti, filoha lefitra zokiolona, ​​Robert W. Baird & Co., Inc.
Gerard A. McHale, Jr., Tompona / Filoham-pirenena, Gerard A. McHale, Jr., PA
Tiffany Esposito, Filoha sy CEO, SWFL, Inc.
Kilasy 2023 (Tapitra ny fe-potoana Oktobra 2023):
Leslie H. King III, Mpanolo-tsaina momba ny fitantanana tsy miankina
Marisa Cleveland, Ed.D., Tale Mpanatanteraka, The Seymour Agency
Dianne Hamberg, filoha lefitra & mpitarika ny sampana, BB&T ankehitriny Truist
John Meyer, filoham-pirenena
Erica Vogt, sekretera ary mpitahiry vola